Samsung Na-ewepụta Ahụke S21 na S21 + na Flat Panels | Gam akporosis
N'ezie enwere otutu ndi n'echere na o puru ime laghachi na ihuenyo dị larịị na Galaxy, nke ọma na S21 na S21 + ha ga-enwe ohere ịnụ ụtọ usoro ahụ na panel.
Mgbe ewebata ndị ọhụrụ Galaxy Buds Pro, anyị nwere ụdị abụọ dị ọnụ ala karịa Galaxy S21 Ultra 5G; N'ezie, a ga-ebuputa ụdị atọ ahụ na njedebe nke ọnwa a na ndoputa ndokwa dị ugbu a iji nweta onyinye ụfọdụ Galaxy Buds Pro.
1.1 Nka na ụzụ nkọwa nke Galaxy S21 +
2.1 Anyị na-aga ozugbo gị nkọwapụta nkọwa gị
Anyị ekwuola ihe niile Egwuregwu ndị kachasị mkpa nke Galaxy S21 Ultra 5G, ya mere, anyị gara S21 + na bụrụ onye "dị n'etiti" nke ihe nlereanya ka ibu na atụmatụ, ọbụna nke ahụ dịkwuo ala S21.
Nnukwu ihe dị iche na anya na ahụmịhe bụ nkwụsị nke oghere ihu iji gaa na ihuenyo ahụ na ọtụtụ ga-atụ anya iweghachi aka ha na ngwaike kachasị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Nke a pụtara na anyị nọrọ na mkpebi 1080p, ebe ọ bụ na o doro anya na ọ gaghị ezuru ndị ejiri 1440p na ụdị ndị gara aga dịka Galaxy S10 dị egwu ma ọ bụ Galaxy Note 10 na-ekwughi maka abụọ nke 2020; ee, o nwere 120hz ya maka ndị chọrọ ịnụ ụtọ nke a maka egwuregwu.
Anyị kwesịrị na-obvize a nta ego nke na ebe nchekwa na enweghị adị nke ụdị 512GB ahụ nke ga-eme ka anyị chefuo nchekwa maka ọnwa ole na ole dị mma.
Esemokwu ndị ọzọ ma ọ bụrụ na anyị etinye ya n'akụkụ Ultra 5G, guzo na ime ụlọ nwere anya m atọ na azụ na njirimara kachasị njọ na ihu na-anọ na 10Mp kama 40MP.
Anyị na-aga nkọwa ya ka anyị wee ghọta nke ọma uru ekwentị a bara.
Nka na ụzụ nkọwa nke Galaxy S21 +
SoC Exynos 2100 (snapdragon 880) pusi
RAM 8GB ma ọ bụ 16GB LPDDR5
Ihuenyo 6.7 "Flat FHD + Dynamic AMOLED 2400 x 1080 / 394ppi HDR10 + / ọnụ ọgụgụ ume ume nkwụnye ọkụ 120Hz / Ọta Nkasi Obi Anya.
Igwefoto na-aga n'ihu 12MP n'obosara (f / 1.8 OIS DPAF) / 12MP ultra-wide (f / 2.2 120 ° FoV FF) / 64MP telephoto (f.2.0 3x ngwakọ OIS DPAF)
Igwefoto ihu 10MP (f / 2.2 80 Celsius FoV PDAF)
Batrị 4.800 mAh na ikuku na-akwụ ụgwọ ma laa azu
Akụkụ 75.6 x 161.1 x 7.8mm
Ibu ibu 202 grams
ahịa 1.049 (128GB)
Estamos tupu onye nke kachasị nke ezinụlọ S21 na na n’otu oge dị ọnụ ala nke atọ. Anyị na-ekwu okwu banyere ihe nlereanya na n'ichepụta si na ugegbe gaa na plastik, ya mere buru n'uche akụkụ a mgbe ị na-atụle ma ị ga-azụ otu ma ọ bụ nke ọzọ; na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ị gabiga gara aga Galaxy S.
Ọ bụrụ na anyị gaa na nkọwa anyị nwere otu, ọ bụ ezie na ọ dị obere karịa tụnyere S21 + na batrị nke ahụ na-anọ na 4.000 mAh. Site n'inwe ihuenyo nwere mkpebi dịka nke ọzọ, ọ na-enye nghọta ka ukwuu na ngalaba ahụ na 421 ppi.
Anyị na-aga ozugbo gị nkọwapụta nkọwa gị
Ihuenyo 6.2 "Flat FHD + Dynamic AMOLED 2400 x 1080 / 421ppi HDR10 + / ọnụ ọgụgụ ume ume nkwụnye ọkụ 120Hz / Ọta Nkasi Obi Anya.
Batrị 4.000 mAh na ikuku na-akwụ ụgwọ ma laa azu
Akụkụ 71.2 x 151.1 x 7.9mm
ahịa 849 (128GB)
La ọdịiche dị n'etiti S21 na S21 Ultra 5G karịrị anya, ma ebe ị ga-etinye uru dị na ọdịiche dị n'etiti S21 na S21 +. Ha abụọ nwere atụmatụ dị mkpa iji tụlee ya na Otu UI 3.0 (nke anyị nwalere izu gara aga na vidiyo na ọwa anyị), otu ụdịdị dị na azụ maka foto, yana ikike nke mgbawa Exynos 2100 nke na-adịghị ada mbà.
Anyị ga-enwerịrị ihuenyo ahụ dị larịị, yana ebe Samsung nwere ike ịme ka o sie ike ịhọrọ otu ma ọ bụ nke ọzọ bụ n'ihi ihe ejiri obere na plastik ahụ. Ọ ga-adị mkpa ijide otu ma ọ bụ nke ọzọ iji kpebie, mana o doro anya na ha bụ ekwentị abụọ pụrụ iche nke n'eziokwu nwere ihe kpatara ha ka enwetara; Ọ bụrụ na anyị achọworị ịga ọkwa ọzọ, anyị nwere Galaxy S21 Ultra 5G (ọ bụ ezie na ọ dịghị anya na nke ahụ bụ Galaxy Note 10 +).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung na-ewepụta Galaxy S21 na S21 + yana ihu igwe ewepụghị na ọnụ ahịa dị oke oke
Samsung na-ekwupụta ọkwa ọhụụ nke Galaxy Buds Pro na ọkà okwu abụọ